June 2012 - Page 6 of 6 - iftineducation.com
iftineducation.com – Sida ay ku heleyso Shabakada Badweyn.com warar hordhac ah oo laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saacadihii ugu danbeyay uu soo gaaray caasimada Muqdisho hogaamiyihii hore ee Ururka Xizbul Islaam markii danbana ku wareegay Shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys oo magangalio doon ah xiligaan. Warka ayaana sidoo kale sheegaya in Sheekha iyo afar ka tirsan ilaaladiisa gaarka ah…
Sneijder iftineducation.com – Kubad sameeyaha xulka Holland iyo kooxda Inter Milan Wesley Sneijder ayaa sheegay in wadankisu uu qaadi doono koobka qaramada yurub ee Euro 2012. Isagoo Tv-iiga wadankiisa uwramayay ayuu sheegay in ay kasoo kabsan doonaan qasaaradii ay Spain kala kulmeen Final-kii koobkii aduunka ee 2010 ee lagu qabtay South Africa. Wesley waxaa uu sheegay in kadib koobka aduunka uu…
iftineducation.com – Shabakada arimaha Qoyska ee ee Aayahanolosha ayaa gabaryaheey kuula talineysa in aad ka fogaato in sedexdaan arin aad kala hadasho saaxibkaada ee xariirka jaceylka aad wada sameyneysaan . In Aad Uga Hadasho Noloshaada gaarka ah : si waliba oo ay aheyd daruufahaadii hore sida in nin uu ku soo dalbaday ama in ay jiraan rag badan oo kaa helay…
Amitabh Bachchan iyo Naseeruddin Shah iftineducation.com – Labadaan jilaa ee Amitabh Bachchan iyo Naseeruddin Shah oo kamida xidigaha soo maray Bollywoodka kuwa ugu qatarsan ama ugu shidan, waxa ay hada isla soo wada hal filim, kaas oo lagu magacaabo Tewelve. Filimkaan waxaa soo saare ka ah ‘Vivek Agnihotri, wuxuuna ka hadlayaa qiso dheer oo ku saabsan 12-ruux, laakiin si rasmiya…
iftineducation.com – Madaxweeynaha cusub ee dalka Faransiiska Mr.Francois Hollande oo maalintii Talaadada eheed la wareegay xilka Madaxtinimada dalka Faransiiska ayaa waxaa qabsatay Nasiibdaro iyo isku dhex yaac ka dib markii uu 2 Saacadood ka soo daahay Safar uu ku tagi lahaa magaalada Berlin ee caasimada dalka Germany. Madaxweeyne Francois Hollande waxaa Safarkiisa dib u dhigay Roobab xoogan oo ka da´ayay gudaha…
iftineducation.com – Dawladaha aduunka ayaa tartan iyo hardan xoogan waxay ugu jiraan sidii midba uu ku heli lahaa macluumaadka iyo sirta dhinacyada military-ga, dhaqaalaha, siyaasada iyo farsamada hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo xiligan adeegsiga Jawaasiista ay ka mareyso dunida meel aad fog. Hadaba muran horleh oo dhanka diblumaasiyada ku jihaysan ayaa ka dhexqarxay xukuumada Turkiga & Yuhuuda (Isra’il) ka dib markii…
Johnson iftineducation.com – Ciyaaryahanka kooxda Manchester City Michael Johnson ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii looga shakiyay in uu gaari waday isagoo cabsan saacado kahor xarigiisa. Johnson ayaa lasheegay in uu kusii jeeday guriga gabadh ay saaxiibo yihiin oo kuyaal Urmston waxaana intii uu sii socday marar badan darbiyada ku garaacay gaarigiisa. Dadka deegaanka Manchester ayaa laga soo xigtay in Johnson…
Mario Balotelli iftineducation.com – Xiddiga Qaranka Talyaaniga iyo kooxda Manchester City Mario Balotelli ayaa waxaa ka soo yeertay Hanjabaad nuuceeda aanan weli horay loogu maqal ciyaaraha Kubada cagta kaas oo si weeyn ugu digay Taageerayaasha Cunsuriyiinta ah ee ka qeeyb galaya koobka Qaramada Yurub oo dhawaan ka furmi doona dalalka Poland & Ukraine. Mario Balotelli oo Wareeysi siiyay Saxaafada gaar ahaan…